मध्यभोटेकोसीको दोस्रो आईपीओ आजदेखि निष्कासन | Makalukhabar.com
मध्यभोटेकोसीको दोस्रो आईपीओ आजदेखि निष्कासन
काठमाडौं । मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले आज बुधबारदेखि दोस्रो साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गरेको छ । दोस्रो आईपीओ २७ करोड रुपैयाँ बराबरको २७ लाख कित्ता रहेको छ ।
कुल १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ४४ लाख कित्ता आईपीओ मध्ये कम्पनीले संस्थापक संगठित संस्थाका कर्मचारीलाई २१ करोड रुपैयाँ बराबरको २१ लाख कित्ता र ऋणदाता कर्मचारी संचय कोषका कर्मचारीलाई ६ करोड रुपैयाँ बराबरको ६ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको हो ।
आईपीओ मंसिर २२ गतेसम्म वहाल रहेका कर्मचारीले भर्न पाउने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । न्युनतम ५० र अधिकतम ५०० कित्तासम्म भर्न पाइने ग्लोबल आईएमइले जानकारी दिएको छ ।
३ बर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने (लकअप परियड) रहेको छ । सेयर चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सिन्धुपाल्चोक हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, सिन्धु इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, नेपाल अरनिको हाइड्रो कम्पनी र सिन्धु भोटेकोशी हाइड्रोवावर लिमिटेडका सेयरधनीहरुले भर्न पाउनेछन् ।
कम्पनीले हाल सिन्धुपाल्चोकमा १०२ मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोसी आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आउदो सन् २०१९ मा आयोजन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आउदो ३ वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा प्रतिसेयर आम्दानी बढेर २१ रुपैयाँ पुग्ने कम्पनीको प्रक्षेपण छ । चालु आर्थिक वर्षसम्म नोक्सानमा जाने कम्पनीले ३ वर्षमा नाफा २७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ हुने कम्पनीको प्रक्षेपण छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिसेयर ०.१७ पैसा आगामी वर्ष १४ र ०७७/०७८ मा १७ रुपैयाँ ५७ पैसा पुग्ने कम्पनीको प्रक्षेपण छ । साढे ७ वर्षमा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्ने जानकारी दिएको छ । त्यसपछि लगानीकर्ताले राम्रो लाभांश पाउने छन् ।
केयर नेपाल लिमिटेडले केयर एनपी आईपीओ ग्रेड ४ दिएको छ ।
झाडीमा फेला परेका नवजात शिशुको उद्धार
माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’ को सेयर खुल्यो, पहिलो आवेदन प्रधानमन्त्रीको
नेबिकोको ब्रन्च बटर कुकिज रुचाउँदै उपभोक्ता
चैत्र ५, काठमाडौं । नेबिको विस्कुटले बजारमा ल्याएको... जारी राख्नुहोस...
काठमाडौं, ५ चैत्र । आज मंगलबार सोमबारको तुलनामा अमेरिकी डलरसहित केहि विदेशी मुद्राको भाउ घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज अमेरिकी डलर १ को खरिददर १०९ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ९५ पैसा तोकेको छ । जुन हिजोको तुलनामा घटेको हो । जारी राख्नुहोस...
केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको फिजिबिलिटी अध्ययनका लागि १७ अर्ब माग
काठमाडौं, ३ चैत्र । आज साताको पहिलो दिन शुक्रबारको तुलनामा अमेरिकी डलरसहित केहि विदेशी मुद्राको भाउ घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज अमेरिकी डलर १ को खरिददर ११० रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ ८५ पैसा तोकेको छ । जुन हिजोको तुलनामा केहि घटेको ह... जारी राख्नुहोस...
नेपालकाे लगानी ऐनलाई ‘कम्पिटेटिभ’ बनाउनुपर्छः पूर्व राजदुत शर्मा
चैत्र २, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् पूर्व राजदुत डा. शंकर शर्माले नेपालमा विदेशी लगानीको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै डा. शर्माले भने,‘अहिले हाम्रो विदेशी लगानीको अवस्था... जारी राख्नुहोस...
चैत्र २, काठमाडौं । बिमामा नेपालीको पहुँच बढाउने उद्देश्यले राष्ट्रव्यापी अभियान चलाइने भएको छ । लामो समयदेखि आर्थिक पत्रकारिता गर्दै आएका युवा र केही बिमा विज्ञको सक्रियतामा स्थापित नेप्लिज सेन्टर फर इन्स्योरेन्स एन्ड सोसल सेक्युरिटी (एससिस) ले सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा... जारी राख्नुहोस...
महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सको ३५ जिल्लामा तालिम तथा अन्तरक्रिया
चैत्र २, काठमाडौं । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले कारोवार सञ्चालनको १ महिना भित्र ३५ जिल्लामा बीमा जागरण, अन्तरक्रिया तथा तालिम सञ्चालन गर्न सफल भएको छ । २०७५ माघ २७ गतेबाट कारोवार सञ्चालन गरेको नेपालको १९ औं जीवन बीमा कम्पनीले सातै प्रदेशका ३५ जिल्लामा ७५ वटा क... जारी राख्नुहोस...
७ महिनामा ५ खर्ब १५ अर्ब रेमिट्यान्स, गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढ्यो
काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको सात महिना अर्थात् साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा ५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बै... जारी राख्नुहोस...